डडेल्धुराको एक घरमा थाले डा. केसीले १७औँ अनशन – Health Post Nepal
डडेल्धुराको एक घरमा थाले डा. केसीले १७औँ अनशन
२०७६ कार्तिक १८ गते १८:०३
अवकाशको दिन ६ बुँदे मागसहित डा. केसीले दिए १२ दिने अल्टिमेटम, १७औँ सत्याग्रहको चेतावनी
जुम्लामा १९ पटक अनशन सुरू गरेका डा. केसीका ६ बुँदे माग यस्ता छन्
डा.केसी अस्पताल भर्ना, ‘अब्जरभेसन’का लागि सिसियूमा
चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा डा. केसीको ऐक्यबद्धता, संसदीय उपसमितिको सिटसंख्या बढाउने निर्देशनप्रति आपत्ति
चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले १७औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लामा डा. केसीले सोमबार साँझ ५ बजे अनशन सुरु गरेका हुन् ।
यसपटक उनी कुनै अस्पतालमा नभई निजी घरमा अनशन बसेका छन् । डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालनिजिक रहेको निर्मल फार्मेसीको नाममा औषधि पसल चलाइएको एक घरमा डा. केसी अनशन बसेका छन् । डा. केसीको १७औँ अनशन मूलतः सरकारले विगतका सत्याग्रहका क्रममा गरेका सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ ।
अनशन बस्नुअघि डा. केसीले स्वास्थ्यपरीक्षण गराएका थिए । १६औँ अनशन पूर्वी नेपालको इलाममा पुगेर बसेका डा. केसी यसपटक सुदूरपश्चिम पुगेका छन् ।
डडेल्धुरामा डेटा मेडिकल कलेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कलेज सञ्चालनको निर्णय भएको लामो समय भए पनि अझै पठन–पाठन सुरु हुन सकेको छैन । मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले आफ्नै लगानीमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग डा. केसीले उठाउँदै आएका छन् । यसैलाई बल पुर्याउन पनि त्यस क्षेत्रमा पुगेर अनशन बस्न जरुरी भएको डा. केसीको भनाइ छ ।
प्राध्यापन तथा संस्थागत चिकित्सकीय सेवाबाट अवकाश भएपछि डा. केसीको यो पहिलो अनशन हो । यसअघि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत हुँदा १६ पटकसम्म सत्याग्रह चलाइसकेका छन् । उनले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि २१ असार ०६९ मा आफू कार्यरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पहिलो अनशन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि पटक–पटक कठोर अनशनमार्फत चिकित्साशिक्षा सुधारका अनगिन्ती क्षेत्रमा सरकारलाई सम्झौता गराएका डा. केसीका केही महत्त्वपूर्ण मागमा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनले १७औँ अनशन थालेका हुन् । यद्यपि, नेपाली चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डा. केसीको सत्याग्रहले नीतिगत र व्यावहारिक रुपमा निकै ठूला उपलब्धिलाई संस्थागत गरिसकेको छ ।
२७ असोजमा उमेरहदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएकै दिन डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा आफूसित सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयनसहित ६ बुँदे माग राख्दै त्यसलाई पूरा गर्न ८ कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएका थिए । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नगरेमा तिहार सकिएलगत्तै १३ कात्तिकदेखि १७औँ अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका डा. केसीले सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि तिहार, छठजस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वलाई मध्यनजर गर्दै अनशनको मिति १८ कात्तिकलाई सारेका थिए ।
डा. केसीका ७ बुँदे माग :